Fruits-ka U Fiican Hooyada Uurka Leh - Daryeel Magazine
Liin macaan/bambeello: waxay hooyada ka caawinaysa in jirkeeda ay ka dhigto mid qoyan aan biyo la’aan ahayn. Liin macaanta ayaa ka kooban macdanta loo yaqaan folate taasoo qayb ka ah walxaha ay ka samaysmaan unugyada dhiiga cas, waxayna ka hortag wanaag san u tahay inay san hooyadu dareemin dhiig yari iyo nafaqo darro soo wajahda xilliga uurka. Liinta ayaa sidoo kale ka kooban fiitamiin C kaasoo ka hortaga dhaawaca soo gaari kara unugyada jirka. Waxay faa’ido balaaran u leedahay uurjiifka waxayna ka hortagtaa cillad ku imaan karta samaysinka maskaxda iyo xangullaha
Canbaha: ayaa ka kooban fiitamiinada A iyo C, waxuuna muhiimad u leeyahay hooyada uurka leh iyo ilmaha uur jiifka ahba. Hal koob oo canbe ayaa ka kooban xadiga saxda ee ay hooyadu uga baahan tahay fiitaminada A iyo C. fiitamiinka A ayaa muhiimad u leh uurjiifka, waxuuna ka caawiyaa difaaca jidhka xilliga dhalashada iyo kadibba.
Afagaadho: ayaa ka kooban macdan ay ka mid yihiin magnesium, potassium iyo choline. Hooyooyinka uurka leh ee cunna ama cabba afagaadhada ayaa waxaa ku yar lalabada iyo calool qabadka taasoo loo aaneeyo macdanta magnesium iyo potassium. Afagaadhada ayaa sidoo kale ka kooban fiitamiinada A iyo C, maadada Iron, iyo xaddi faybar ah. Choline ayaa muhiimad u leh koritaanka maskaxda iyo neerfayaasha uurkajiifka.
Liin dhanaan: waxay ka kooban tahay macaadiin iyo fiitamiino muhiim u leh hooyada uurka leh. Waxaa ay yaraysaa calool istaaga iyo lalabada, waxay siyaadisaa dhalaalka jirka, waxayna u wanaagsan tahay caafimaadka ilkaha. Cunnida liin dhanaanta ama cabida biyaha ay ku jirto liin dhanaanta ayaa ah kuwo muhiim ah oo aan laga tagi karin xiliga uurka leh.
Mooska: ayaa ka kooban potassium, fiitamiino iyo faybar. Moosku waxuu hooyada uurka leh ka yareeyaa walwalka, isku ururka minka, calool istaagga. Mooska ayaa sidoo kale u wanaag san maqaarka iyo ilkaha.
Beeris nooyacada kala duwan ee miraha ku bahoobay magacaan ayaa ka kooban fiitamiino, macaadiin, kaarbohaydarayt iyo faybar. Hoyada uurka leh ayaa u baahan xadi 60 ilaa 70 boqolkiiba hadii aysan qabin sonkorowga xilliga uurka, waxayna hooyada siinayaan enerji sidoo kale waxay u gudbinaysaa ilmaha.
Tufaaxa: waxuu ka koobanyahay, faybar, macaadiin iyo fiitamiino, waxuuna hooyada uurka leh iyo uurjiifkaba u leeyahay faa’ido balaaran. Warbixin ayaa sheegaysa in ilmaha ay dhasho hooyada cunta tufaaxa uu yaryahay jaaniska ay ku heli karaan neef. Tufaaxa ayaa qaybta koowaad kaga jira miraha la amaano ee guud ahaan u wanaagsan caafimaadka.
Qaab Jiifka Xilliga Uurka 8 Arrimood Oo Ay Tahay Hooyada Uurka Leh Inay Ka Taxadarto Waxyeelada Ay Daawooyinku Ku Keenaan Hooyada Uurka Leh Iyo Ilmaha Ay Sido Muhiimada Baamiyuhu uu u Leeyahay Hooyada Uurka Leh Iyo Dadka Macaanka Qaba